Injineerada Shirkadaha Korontada Magaalooyin Soomaaliya oo Garoowe lagu Tababaray – Radio Daljir
Injineerada Shirkadaha Korontada Magaalooyin Soomaaliya oo Garoowe lagu Tababaray
Juunyo 15, 2017 10:29 b 0
Shirkadda tamarta Soomaaliyeed ee NECSOM ayaa maanta xarunteeda magaalada Garoowe tababar soconayey muddo afar todobaad ah ugu soo gabagabaysay injineero xooga korontada ah oo ka kala yimid qaar kamid ah magaalooyinka Soomaaliya.
Injineeradaani oo ka kala yimid magaalooyinka Laacaanood, Galkacyo, Baydhabo, Muqdisho, Kismaayo iyo kuwa ka hawlgala xarunta NECSOM Garoowe ayaa waxaa casharada siinayey Injineero ka socda shirkad laga leeyahay wadanka Talyaaniga, iyadoona loo tababarayey sidii quwadaha dabiiciga ah tamarta korontada looga dhalin lahaa.
Maamule ku-xigeenka Shirkadda NECSOM Cabdirisaaq Sanyare oo ugu horayn ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in Injineeradu ay qaateen casharo wax ku’ool ah ayna sii wadi doonaan tababarada noocaan ah.
Gudoomiyaha shirkadda tamarta Korontada ee NECSOM Cabdifataax Maxamed Cabdi Kismaayo ayaa sheegay in ujeedka ay tababarka intaas baaxadda le’eg u qabteen ay ahayd sidii mustaqbalka laysugu xiri lahaa wakaaladaha ka shaqeeya korontada Soomaaliya, loona soo saari lahaa Injineero awooda inay hantaan mustaqbalka dalka.
Dhanka kalena, Kismaayo ayaa ku booriyey Injineeradii ka faa’iidaysanayey tababarkaani inaysan dayicin aqoontii lasiiyey ee dhaqaalaha badan lagu bixiyey ayna dib ugu celiyaan shirkadihii tamarta korontada ee ay ka socdeen.
Qaar kamid ah Injineeradii ka faa’iidaysanayey tababarka oo kahadlay madasha ayaa u mahadceliyey NECSOM, waxaana ay balanqaadeen in cilmigii ay barteen ay umadda Soomaaliyeed uga faa’iidayn doonaan.
Wasiir ku-xigeenka howlgala guud iyo gaadiidka dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Yuusuf oo soo xiray tababarka ayaa sheegay in aqoonta la baray Injineeradaani aan laga helin qaar kamid ah dalalka horumaray, loona baahan yahay in dadka iyo dalka looga faa’iideeyo, wuxuuna ammaan gaar ah ujeediyey shirkadda NECSOM.